Fifidianana mafotaka | NewsMada
Par Taratra sur 10/10/2018
Tonga tokoa ny fahavaratra ! Fotoana hiavian’ny orana, ahitana ny tranga samihafa mifanaraka aminy. Mifanojo amin’izany ity fanombohan’ny fampielezan-kevitra mifanaretsaka eran’ny tanàna sy ny faritra ity. Samy manao izay ho afany ny kandidà tsirairay, ary tsikaritra fa tsy mifampitsitsy, miezaka manatsara ny endriny eo imason’ny mpifidy.
Hafana satria efa hita soritsoritra ny santionany, toy ny fifampitsikerana mba tsy hilazana hoe fifanaratsiana, ary azo adika fa fifaminganana koa anefa, handemena ny mpifaninana.
Hafotaka toy ny andro fahavaratra ity fifidianana ity. Noterena hatao na voafaritra tao anaty lalàmpanorenana aza fa tsy tokony hotanterahina ao anaty fahavaratra. Dia kofehy manara-panjaitra toy izany avokoa ny mpifaninana rehetra, mifampitolona ao anaty fotaka, toa tsy misy intsony ny fenitra arahina, mba tsy hilazana hoe samy manao izay saim-pantany.
Fahavaratra mafotaka, fotoan’ny maitsoahitra, tsy fisian’ny vary sy ny sakafo ankapobeny, mahakely ny fidiram-bolan’ny tantsaha, ny fampidirana ny mpianatra, sns.
Sao vao mainka fotoana hanararaotan’ny mpilatsan-kofidina hividianana ny vaton’ny mpifidy amin’ny “patsa indray mahandro”, amin’ny fizarana “tee-shirt” sy volakely tsy mahavita taona. Toa nifandrotehana tokoa ny fitakiam-bola tamin’ny fanombohana ny fampielezan-kevitra teny amin’ny manodidina ny Renivohitra teny, ny alatsinainy 8 oktobra teo, hoe?
Fanararaotana ny Malagasy tsimandadiharona, valalabemandry, toy izany no ataon’ny te hitondra ny firenena. Hifaninanana indray izao ny velirano sy ny fanomeza-toky tsy hay ho tanteraka. Tsy misy maharatsy izany, saingy Andriamanitra avo fipetraka fa iva fijery. Firenena laika i Madagasikara, saingy vavaka amin’i Zanahary ny votoatin’ny hiram-pireneny.